Haweenka Puntland oo muujiyey in aysan cadaadis caalami ah ku helin doorkooda | sowora
← Message of Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of UN Women, for International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation –
Ifrah Ahmed Campaign Against Female Genital Mutilation →
Haweenka Puntland oo muujiyey in aysan cadaadis caalami ah ku helin doorkooda
Posted on February 2, 2014	by sowora
Guud ahaan haweenka Puntland ayaa ku naaloonaya markii ugu horaysay oo awood wanaagsan ay ku yeesheen maamulka gaar ahaan golaha xukuumada, 47 wasiir, wasiir ku xigeeno iyo wasiiru dowlayaal isugu jira oo dhowaan la magcaabay ayaa haweenku ka heleen shan xubnood.
Ururada haweenka iyo qaybaba kale ee bulshada ayaa boggaadiyey jagooyinka ay haweenku heleen, wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Puntland oo u warramaysay horseed Media waxay sheegtay in kaalitan helitaankeeda ay door wanaagsan ka ciyaareen odoyaasha qabiilada iyo madaxweynaha.
“Dowladan waa mid tayo wanaagsan waxaa ka muuqda dhamaan qaybaha bulshada.” Ayey tiri wasiir ku xigeenka beeraha siciido xuseen cali, waxay sheegtay in dumarku ay muujiyeen dadaal dheer ka hor is bedelka.
Haweenka Puntland oo filayey inay baarlamanka ka helaan ilaa 5 xubnood oo asaaskii hore lagu heshiiyey ayaa qaatay hal xildhibaan, dumarka oo ka xumaaday qoondadaas ayaa u aaneeyey odoyaasha dhaqanka iyo qabiilada oo muhiimada siiya ragga oo keliya.
“Marnaba cadaadis caalami ah ma siinayo mudnaanta, mudnaanta waxaan siinayaa dadaalka aan muujinay, waxgaradka iyo madaxda maamulka oo gacan wanaagsan na siiyey.” Ayey tiri Siciido Xuseen oo aan wax ka weydiinay in cadaadis caalami ah uu ku jiro kaalinta haweenka ay ku heleen xubnaha wasiirada.
Haweenka ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ay door wanaagsan ka helaan xafiisyada kale ee dowladda “waxaan rajaynaynaa agaasime guud min gudoomiyaasha gobol ilaa degmo ilaa maamulka kale ee dhismaya inaan qayb ka noqono.”
Madaxweynaha Puntland Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in xukuumadiisa uu ku saleeyey qaybaha kala duwan ee bulshada mid ay ka dhexmuuqdaan, isagoo ka hadlayey arrimaha haweenka ayuu yiri “dumarka iyaga ayaa dadka taban taabinayey oo dhib kasta u taagnaa, wax shuruud ah marnaba kuma aysan xirin waxqabadkoodii hore, marka dowladnimadu timaado maaha in la qadiyo.”
“Hadda ma aanan siin xuquuqdii ay haweenku lahaayeen waanse filaynaa inaan gaarsiin doono halka ay rasmi ahaan xaqa ugu leeyihiin.” Ayuu yiri Prof. Cabdiweli oo jimcihii shalay ka hadlay magcaabista wasiiradiisa
Wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska oo loo magcaabay Aniso xaaji muumin iyo Wasiirka Wasaaradda Dastuurka, Arrimaha Federaalka iyo Dimoqraadiyadda Sahra Siciid Nuur ayaa ugu miisaan weyn jagooyinka cusub ee haweenka la siiyey, saddex ku xigeen ayaana haweenku ka helay wasaaradaha beeraha, haweenka iyo caafimaadka.
“Qoondada dumarka ay raadinayaan maaha mid ay is leeyihiin raga kula mid noqda ee waa mid aan ku doonayno inaan ku helno himilada aayaha dumarka oo ah 60% sida lagu qiimeeyo.” Siciido Xuseen
Marka dib loo eego xukuumadihii hore haweenku marna ma yeelan tiro wasiiro oo intaas le’eg, inta badan waxay wasiirada ku yeelan jireen wasaarada haweenka iyo arrimaha qoyska oo keliya.
Wasiir ku xigeenka beeraha Puntland waxay hugaamiye sare u ahayd kacdoonka haweenka TALO-WADAAG oo shaqaynayey tan iyo bishii October ee sanadkii hore, xiligaas oo dhaqdhaaq siyaasadeed oo awood badan iyo rajo is bedel laga dhur-sugayey Puntland, waxay tilmaantay dadaalkii haweenka inuu qayb ahaan guulaystay balse weli aysan nasan doonin.
xigasho Horseed Media